ကော်ပီစနစ်တကျလုပ်ကြပါစို့ (Zaw Aung (Mon Ywa) | MoeMaKa Burmese News & Media
မြန်မာပြည်က အလုပ်လုပ်သူ အားလုံး၏ ၇၀% သည် လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၆၀ ရှိလျှင် ၄၂သန်းက လယ်ယာလုပ်ငန်းပေါ် မှီခိုနေသည်။ အလွန်များပြားလှတဲ့ လူထုကြီးဖြစ်သည်။ သူတို၏ လယ်ယာလုပ်ငန်း တိုးတက်စေဖို့ စက်မှုလယ်ယာ နည်းစနစ်များကို ပြောင်းလဲရမှ ဖြစ်သည်။ သမရိုးကျ နောက်ချေး၊ နွား၊ မိုးရေနဲ့ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးသည့် ခေတ်ကို ပြောင်းလဲရပါမည်။ သို့မှသာ အဆင်းရဲဆုံးလူတန်းစား တောင်သူများရဲ့ ဘ၀ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ လက်တွေ့ကျပါမည်။ ပြောဆို၊ ညွန်ကြားနေသည်ထက် လက်တွေ့လုပ်ဖို့ အရေးကြီးနေပါသည်။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များလည်း ဆရာစံအရေးခင်းလို ဆင်းရဲတွင်းနက်နေသော တောင်သူအရေးခင်းကြီးများဖြစ်လာလျှင်၊ သိပ်ခက်သွားနိုင်ကြောင်း သိရှိ၊ သတိပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ခက်တာမှာ ရင်းနှီးမြှတ်နှံသူများက လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုံးဝဆို၊ လုံးဝ မရင်နှီးချင်ပါ။ နှစ်ရှည်လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး အမြက်သိပ်မရ။ သယံဇာတရောင်းစားသောလုပ်ငန်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာပါမစ်လုပ်ငန်း၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်း (အရောင်းအ၀ယ်)၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး များက 100% မကသော အမြက်တွေ တစ်နှစ်အတွင်းရနိုင်သောကြောင့် ထိုကဏ္ဍများကိုသာ ရင်းနှီကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမှုမလုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော် ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုကသာ အဓိကဖြစ်နေပါသည်။
အခွန်ကို မှန်ကန်စွာကောက်ခြင်းကြောင်း လက်ရှိ အခွန်ရရှိငွေ 4.5% of GDP ကနေ 10% လောက်တိုးတက်လာဖို့ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ 17% ရရှိပြီး၊ တိုးတက်သော အနောက်နိုင်ငံများမှာ 40% အထိ အခွန်ကောက်ရငွေများလှပါသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအခွန် ကန်ဒေါ်လာ 1 billion usd ရခဲ့သည်။ ယခု ၂၀၁၂တွင်4billion usd အထိ ရလာသောကြောင့် တော်တော်တိုးတက်လာပါသည်။ အစိုးရသစ်အတွက် အစကောင်းသည် ပြောရပါမည်။ နောက်တစ်ချက် – ပြည်သူလူထုကို အလုပ်လုပ်ချင်လာရန် ကား(ပို့ဆောင်ရေး) နဲ့ တယ်လီဖုန်း (ဆက်သွယ်ရေး) ၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ စသည်တို့ ဈေးချိုအောင် လုပ်ပေးရပါမည်။ တရားမ၀င်အခွန်တောင်းရမ်းမှု လျှော့ချရေးကတော့ အခုချိန်မှာ အခက်ခဲ့ဆုံးပါ။
ရေရရှိရေးအတွက် ရေရရှိရေးက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သမရိုးကျ မိုးရေပဲ အားကိုးလို့ မရပါ။ အစိုးရဆယ်မြောင်းရှိရင်တော့ အိုကေပေမဲ့ အများစုကတော့ ရေအခက်ခဲရှိပါတယ်။ မုံရွာမြိုနယ်၊ မုံရွေးမှာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဦးဆောင်ပြီး ဆည်မြောင်းတစ်ခု ပုဂ္ဂလိကတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ အဲဒီမုံရွေးတ၀ိုက်ရွာများ ရေလုံလောက်လို့၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးများအောင်မြင်ပြီး၊ ကျေးရွာလူထု ဘ၀မြင့်မား၊အဆင်ပြေလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြစ်ချောင်းရေများကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့။ အစိုးရသိပ္ပံနည်းပညာ ညွန်ကြားရေးမှုးချုပ်တစ်ဦးက မြေအောက်ရေရရှိရေး (အ၀ီဝိတွင်း) ကို အထူးစိတ်ဝင်စားပြီး နိုင်ငံခြားအကူညီရဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေပဲ လုပ်ကိုင်ရမှာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် ရေမြောင်းတွေ ပုဂ္ဂလိက ဖောက်ထားပြီး၊ အနီးနားက လယ်ယာစိုက်ပျိုးသူတွေက ရေ၀ယ်သုံးကြပါတယ်။
– နည်းပညာ (မျိုးစေ့၊ မြေသြဇာ၊ စက်ကရိယာများ)ကလည်း အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မျိုးစေ့များကို နိုင်ငံတော်က တာဝန်ယူပေးရပါမယ်။ နောက်တခု မြေသြဇာကို တရုပ်နိုင်ငံက အကြီးကျယ်တင်သွင်းပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံများကလည်း တင်သွင်းပါတယ်။ မြေသြဇာရမှာ အထွက်တိုးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ မြေသြဇာက ပြည်တွင်းမှာ စက်ရုံများနဲ့ ထုတ်လုပ်ဖို့ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ရေရှည်မှာတော့ ပြည်တွင်းထုတ်မြေသြဇာများပဲ သုံးဖို့ရှိပါတယ်။ စက်မှုနည်းပညာများ၊ စက်ကရိယာများကတော့ နွားလှည်းက အခြေခံသုံးနေဦးမှာဖြစ်ပေမဲ့၊ အရေးကြီးတဲ့အချိန် လယ်ထွန်စက် (ထော်လာချီ) လိုယာဉ်မျိုးက အလွန်အသုံးကျပါတယ်။ အခြား အသေးစား စက်ကရိယာများစွာလည်း လိုအပ်ပါတယ်။
– ချေးငွေ။ စင်ကာပူက SMU စီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့ရပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အတွေ့ကြုံရှိသူ မြန်မာလူငယ်တစ်ဦးပြောပြချက်က၊ ၁၉၁၀-၁၉၃၀ အတွင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်ပဆန်မရောင်းချတဲ့ နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့နံပါတ်(၁) ဆန်တင်ပို့ရောင်းချတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ချစ်တီးကုလား ငွေချေးလုပ်ငန်းများကို ဗြိတိသျှအစိုးရက အိန္နိယကနေ ခေါ်လာ၊ လုပ်ခွင့်ပေးလို့ ဖြစ်ပါတယ် ..တဲ့။ ဆင်းရဲလို့ တောင်သူလယ်သမား အရေးတော်ပုံဖြစ်ရခြင်းဟာ ချစ်တီးကုလားများကြောင့်လို့ လက်ညိုးထိုးခဲ့ပေမဲ့၊ ချေးငွေကို စနစ်တကျ ချေးပေး၊ စပါးပြန်ကောက်၊ အတိုးရင်းငွေပြန်သိမ်း လုပ်နိုင်တဲ့ ချစ်တီးကလားများ အဓိကဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခု မြန်မာအစိုးရက တောင်သူများကို ချေးငွေပေးခဲ့ပေမဲ့၊ အဲဒီချေးငွေရလာရင် လုပ်ငန်းထဲ သုံးဖြစ်အောင် မကွပ်ကဲနိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ လယ်ယာလုပ်ငန်း ငွေပေါ်ချိန်မှာလည်း၊ ချစ်တီးကုလားများက အတိုးကြီးတော့ နောက်ဆုံး လယ်ယာပေါင်နှံပြီး၊ လယ်ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုး.. အခုခေတ်မှာလဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ လယ်ပိုင်ရှင်လူတန်းစားတရပ်က ချစ်တီးကုလားပုံစံ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ လယ်ယာခရိုနီလို့ ပြောရမလား။ ဟုတ်ပါတယ်..ချေးငွေ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ပညာနည်းတဲ့ တောင်သူများကို ချေးငွေစနစ်တကျ သုံးစွဲရေးကို နိုင်ငံတော်က လယ်ယာပညာတတ်များက ဦးဆောင်ပညာပေးရပါမယ်။
– Clan လို့ခေါ်တဲ့ ရပ်ရွာအကြီးကဲများ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ပညာနည်းပါးတဲ့ တောင်သူလယ်သမားများအပေါ် သူတို့ရဲ့ သြဇာလွမ်းမိုးမှု ကြီးမားလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှာ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်က ဒါစိုက်၊ ဒီလိုစိုက်၊ ဒီမြေသြဇာသုံး၊ ဘယ်သူ့ဆီရောင်း .. စသဖြင့် တချက်ပြောလိုက်ရင်၊ ရွာသားများက လိုက်နာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွာသူကြီး၊ လူကြီးများကို ပညာပေးရေးက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒေသအလိုက်ဖြစ်စေ၊ လူမျိုးစုအလိုက်ဖြစ်စေ .. ရွာသူကြီးလို သြဇာရှိသူများ၊ စုပေါင်းပြီး ညီညွတ်စွာ လယ်ယာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိရပါမယ်။ ဒါမှ အပြင်က စီးပွားရေးသမားများရဲ့ အမြက်ထုတ်၊ အခွင့်အရေးသမားများရဲ့ အကြံဥာဏ်များကို တွန်းလှန်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
နာဂစ်ဆားငံရေ၀င်တဲ့ဒေသများ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးအောင်မြင်နေခြင်း၊ ငါးမွေးမြူရေး ပြည်ပပို့မှု မကိုက်သောကြောင့်ရပ်နားလိုက်ရသော ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ ခေတ်များတွင် ငါးကန်များမှ ငါးများ၊ အစာကြွေးရန်မလိုပဲ ကြီးထွားလာပြီး၊ ဖမ်းယူရောင်းချနိုင်ခြင်း၊ မြန်မာပြည်တ၀ှမ်း လယ်ယာများမှထွက်သော သီနှံများ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း…စသည့် မြန်မာပြည်အရင်းခံ ရေမြေအနေထား အလွန်ကောင်းခြင်းကို ရထားပါသည်။ အစိုးရပဲ ကောင်းဖို့လိုပါသည်။ ပြည်ပပို့ကုန်များ ၂၀၁၀ မှာ ပဲအမျိုးမျိုး၊ နှမ်း၊ ဆန်၊ ကုလားပဲ၊ အသီးခြောက်များ အဓိကဖြစ်ပြီး၊ ပြောင်း၊ ငြုတ်၊ ကြက်သွန်၊ ၀ါဂွမ်း၊ သကြား၊ ဆိုယာပဲ၊ တို့ ဒေါ်လာ ၃သန်းကျော်ဖိုးစီ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သဘာဝရာဘာ၊ သဘာဝပျားရည်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဟင်းရွက်ခြောက်၊ နှမ်းပစ်၊ အမဲခြောက်၊ လဘက် စသည်တို့အနည်းငယ် (ဒေါ်လာတစ်သန်းခန့်) တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ မှာ သန်းပေါင်း၅ထောင်ဖိုးလောက် (အချက်အလက်များ မှန်းခြေ) တရှိန်ထိုးရောင်းချခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာပြည်တွင် ဆန်းကုန်သည်အသင်း၊ ပဲကုန်သည်အသင်းများ အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။ အခြားအသင်းများ ဥပမာ အထည်ချုပ်အသင်း၊ ကွန်ပြူတာအသင်း စသည်တို့လည်း ရှိပါသည်။ အစိုးရမလုပ်နိုင်သောအဖွဲ့ များစွာပေါ်ရပါမည်။ အစိုးရသြဇာကင်းပြီး၊ အစိုးရကသာ ထိုအသင်းများလိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးရပါသည်။
ဥပမာ ..သရက်သီး ပြည်ပတင်ပို့လိုပါက အသင်းအဖွဲ့ရှိရမည်။ထိုအသင်းဖွဲ့များဖြင့် ပထမ ပြည်တွင်းဈေးကွက် အရင်ရှာဖွေရမည်။ အသီးအနှံများ တစ်ပြည်လုံး ဈေးညီသွားအောင် အခွန်(ဌာနဆိုင်ရာမှတောင်းရမ်းခြင်း) နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သက်သာရမည်။ ပြည်ပပို့ကုန်အတွက် ကိုးရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ထိုင်း၊တရုပ် ထုတ်ကုန်များကို အနောက်နိုင်ငံများသို့ရောက်ရှိနေထိုင်ကြသော ကိုးရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ထိုင်း၊တရုပ်များက ဈေးကွက်ရှာပေးကြပါသည်။
ယခုအခါ အချို့အနောက်နိုင်ငံကြီးများနှင့် ကိုးရီးယား၊ဂျပန်စသည်တို့က Made in Myanmar ကုန်စည်များကို အခွန်လွတ် tax free promotion ပေးနေသည်ဟု ဆိုသည်။
ကိုယ့်နိုင်ငံထွက်ကုန်များကို ကိုယ့်နိုင်ငံသားများက ပြည်တွင်းမှာ အားပေး၊သုံးဆောင်သလို၊ ပြည်ပမှာလည်း အားပေးသုံးဆောင်၊ ညွှန်းရပါသည်။ ပြည်တွင်းမြန်မာအင်အားစုနှင့် ပြည်ပမြန်မာအင်အားစု ၂ခုတို့ ဆက်သွယ်ပေးသော စီးပွားအဖွဲ့အစည်းများ မြန်မာအစိုးရကလည်း အားပေး၊ကူညီ၊ လမ်းညွှန်ရပါမည်။
ဥပမာ Myanmar Chamber of Commerce Office.ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် စားသောက်ကုန် စက်မှုလုပ်ငန်းများ Process Industry မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်ရင်းနှီးလာကြပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာတောင်သူလယ်သမားများအဖို့ Export တွက်ခြေကိုက်ပါက မိမိသဘောကျ လွတ်လပ်စွာ၊ အမြန်ဆုံးစိုက်ပျိုးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ Product of Myanmar ကုန်ချောများကို တိုက်ရိုက်ပြည်ပရောင်းချနိုင်ဖို့ မဝေးတော့ပြီ။
One Response to ကော်ပီစနစ်တကျလုပ်ကြပါစို့ (Zaw Aung (Mon Ywa)
Soe Myint on April 22, 2013 at 2:54 am
This is the good article for the people of Myanmar. Copying the products are the short cut to develop the economy of the country. For example, in early days the countries like Taiwan, Japan, Hongkong were copying the products from other developed countries asastepping stone and made huge benefits from them. After then they control the quality of their products to meet the international standards to maintain their market shares in the international market places. Now adays most of the countries would prefer to buy the products which are compliance with the International Standards i.e. ISO 9001 or somethings alike. I hope and request you to write in your future articles regarding those ISO standards and important of them to develop our country.